China Poly Bubble Mailer orinasa sy mpanamboatra | Fangda
* FANGDA poly bubble mailer (valopy misy valony) dia vita amin'ny sarimihetsika bubble sy sarimihetsika LDPE, tsy misy poizina, mahatsapa milamina amin'ny tanana sy ny endrika bika.
* Fiasa mahery vaika mahatalanjona, afaka miaro ny entana amin'ny fahasimban'ny hovitrovitra.
* Fanoherana mafy ny ranomaso sy fanoherana ny rano.
* Ny adhesive maharitra amin'ny flap tombo-kase dia mety hanampy amin'ny fampihenana ny loza ateraky ny pilferage fonosana na ny halatra.
* Ny sarimihetsika poly dia mety ho samy hafa loko toy ny fotsy, mainty, mavo, mavokely sns.
* Ny fitaovana ety ivelany koa dia azo vita amin'ny horonantsary vita amin'ny plastika vita amin'ny aliminioma hamenoana ny filan'ny mpanjifa.
* Miaraka amin'ny bolabolan'ny rivotra, ny mailer poly bubble fotsy dia iray amin'ireo valopy maivana maivana indrindra (60% - 70% maivana noho ny kitapo vita amin'ny taratasy). Manampy amin'ny fampihenana ny vidin'ny mailakao!
* Ilay fonosana tombo-kase nohamafisina dia misy adhesive malalaka izay mikatona mandritra ny fotoana sarotra indrindra. Ny ambonin-malama ambonin'ireo valopy bubble ireo dia mety amin'ny fanoratana tanana na fanaovana marika.
Soa azo avy amin'ny mailaka Bubble:
* Fiarovana sy filaminana tsy manam-paharoa
Ny cushioning na padding dia azo apetraka ao anaty valopy fandefasana mailaka mba hiarovana ny atiny.
* Fanamorana ny fizarana
Fonosana vita amin'ny cushioned maharitra mba hialana amin'ny fahasimbana tampoka.
* Miovaova sy mora ampiasaina
Izy io dia mety amin'ny express, e-varotra, fiantsenana, trano fanatobiana entana, birao fampiasana sns.
Ny fanontana vita pirinty dia mety hampirisika ny mpividy mety hividy ny vokatra.
* Fanodinana feno
* Fomba fametahana hafanana hafahafa (misy taratasy fanamarinana momba ny patanty)
* R&D matanjaka miaraka amina patanty 8.
* Mahafeno fepetra miaraka amin'ny fenitra REACH sy ISO.
* Fampidirana mitsangana: fantsom-panafody mihetsika 3 sosona, fanamboarana adiresy miempo mafana sy fandrakofana, fanontana, famonoana maty… vita ao amin'ny atrikasa natokana ho antsika ny fizotran'ireo rehetra.
* Ny kalitaon'ny fandefasana sy ny fahamendrehana miaraka amin'ny vidiny mifaninana indrindra.
* 20 taona mahery amin'ny asa fanondranana sy fanafarana entana.
* Mpamatsy orinasa lehibe manerantany sy mpampita hafatra manerantany mihoatra ny 10 taona.
Previous: A4 Sheet Label